Cepsa inosimudzira zviitiko zvitsva zvemadhijitari kune vatengi vayo nekuda kweRed Hat | Linux Vakapindwa muropa
Cepsa inosimudzira zviitiko zvitsva zvemadhijitari kune vatengi vayo nekuda kweRed Hat
Cepsa, inozivikanwa kambani yemafuta yeSpain yakavambwa muna 1929, inosimbiswawo nehunyanzvi nekushandisa Linux. Uye zvinoita saizvozvo uchishandisa chikuva matsvuku ngowani midziyo, nekudaro uchiwana zviitiko zvitsva uye mashandiro edhijitari kune vatengi vayo. Chinhu chakakurumbira pakati pemakambani azvino anoona kuti matekinoroji matsva ari kuramba achifanira kuzvivandudza.
La Spanish simba kambani inoshanda pamwe neRed Hat yekumhanyisa yakakura, scalability uye kugona kuenderana nenyika nyowani yatinogara mairi, uko kukurumidza shanduko uye kukwikwidzana nharaunda ndicho chingwa uye bota. Kana iwe usingazive maitiro ekugadzirisa kune izvo zvinodiwa uye zvinodiwa nevatengi, iyo yemari uye kuvimba kurasikirwa kunogona kuva njodzi kukambani. Ndokusaka iwe uchifanira kugadzira urwu rudzi rwehukama mubatanidzwa.
Cepsa saka inorangarira yayo dhijitari shanduko zano kubatsira kugadzira uye kupa masevhisi edhijitari nekukurumidza kune vatengi, pamwe nekuvabatsira mukati memusika unogara uchichinja uye uchichinja. Kuti uite izvi, Cepsa yakagadzira iyo hybrid gore-yakagadzirira chikuva neRed Hat OpenShift Container Platform, inotsigirwa neRed Hat OpenShift Container Kuchengetera uye otomatiki nekuda kweRed Hat Ansible Tower, ichibvumira kuburitswa kwemapurogiramu nekukurumidza zvakanyanya.
Ichi chirongwa chemarudzi akawanda chinosanganisira zvikwata zvakasiyana, uye Cepsa inoda kusimudzira kubatana pamwe nekutora nzira yeDevOps. Own Julie Bernal, iyo yataive nerombo rakanaka ku hurukuro muLxA, akataura nezve mubatanidzwa uyu: «Cepsa iri kubheja pane digitization kuti ikwanise kubata zvine simba nekuchinja mune zvevatengi maitiro uye zvido. Isu tinofara kubatsira Cepsa kubatsirwa kubva kune yakavhurika nharaunda hunyanzvi pamwe nekuwedzera kuchengetedzeka uye kuvimbika uko Red Hat's bhizinesi yakavhurwa sosi tekinoroji inopa.«
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Cepsa inosimudzira zviitiko zvitsva zvemadhijitari kune vatengi vayo nekuda kweRed Hat
Peppermint OS 10 yakavakirwa paUbuntu 18.04 LTS inosvika zviri pamutemo
Kuvharirwa kwaHuawei kunogona kuwedzera kupfuura United States neGoogle